सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा हिंसा: पीडितले सार्वजनिक गरिन् ८ वर्ष पुरानो घटना, भएको के थियो ? - PLA Khabar
सौन्दर्य प्रतियोगिताका नाममा हिंसा: पीडितले सार्वजनिक गरिन् ८ वर्ष पुरानो घटना, भएको के थियो ?
काठमाण्डौ – यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नपाओस् पनि किन, बलात्कारको घटना ! त्यसमा पनि सन् २००२ कि मिस नेपाल विजेता माल्भिका सुब्बासम्मलाई जोडिएको छ ।
बुधबार ‘सुसी खान जाने हो’ टिकटक एकाउटबाट एक युवतीले आफु बलात्कारको सिकार भएको जानकारी दिइन् । २/२ मिनेटका २० वटा भिडियोमा उनले कहिले ? कसरी ? बलात्कृत भइन् त्योबारे जानकारी दिएकी छन् ।
आफू बलात्कृत भएकोबारे उनले पूर्व मिस नेपाल माल्भिका सुब्बालाई समेत जानकारी दिएको बताएकी छन् । तर, उनले उल्टै भनिदिएछन्, ‘ग्ल्यामसर क्षेत्रमा यो त नर्मल हो ।’
‘तिमी आउ फोटोसूट गरौं, अनि मोडल बनाउँछौं’ भनेर म्यासेज आयो । त्यति म्यासेज आएपछि उनी निकै उत्साहित भइन् । त्यसरी म्यासेज पठाउनेमा थिए, ति फोटो पत्रकार ।
ति फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले तस्बिर खिचे र उनलाई ५ हजार पैसा दिए । फोटो खिचेर उनीहरूले भने कि हामीले ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ आयोजना गर्दैछौं । म त्योभन्दा अगाडि पनि ब्युटी प्याजेन्टमा भाग लिइसकेकी थिएँ । त्यसैले म राजी भएँ । ब्युटी प्याजेन्टको विनर भइसकेपछि उनलाई ‘सक्सेस पार्टी’ दिने भनियो । उनी तयार भइन् ।
एभरेष्ट होटलमा पार्टी आयोजना गरेको भनियो । उनी त्यहाँ गइन् । जबकि त्यहाँ कोही पनि थिएनन् । उनले प्रश्न गरिन्, खै त अरू मानिसहरू ? उनलाई बोलाएका व्यक्तिले भने, तिमी चाँडै आयौ । अरू विस्तारै आउँछन् । राति ६/७ बजेतिरबाट पार्टी सुरू हुन्छ । तिमी बस्दै गर ।
केही समयपछि वेटर आएर लेमन जुस दिए । उनले भने–यो वेलकम ट्रिट हो । त्यसपछि उनले त्यो खाइन् । खाएको १० मिनेटपछि उनी आफुलाई अनकन्सियस महसुस गर्न थालिन् । त्यसपछि उनले त्यो एब्युजरलाई भनिन्– मलाई गाह्रो भयो, म घर जान चाहन्छु ।
एब्युजरले उनलाई गाली ग¥यो । तिमी विनर भएर यस्तो गर्ने ? तिम्रोबारे अरूले के सोच्लान् ? भनेर गाली गरे ।
‘यस्तै हुन्छ, केटीहरूलाई गाह्रो भयो भने रेष्ट गर्नलाई भनेर रूम लिएर राखेको छु, तिमी त्यहाँ गएर एकछिन रेष्ट गर । सबैजना आएपछि म तिमीलाई बोलाउँछु’ भने । त्यसपछि उनी रूममा रेष्ट गर्न गइन् ।
त्यतिबेला उनी १६ वर्षकी थिइन् । जतिबेला उनको नागरिकतासमेत बनेको थिएन् । कोठामा रेष्ट गर्दा बेला–बेला उनलाई होस आइरहेको थियो । जति बेला होसमा आयो त्यतिबेला लाग्यो कोहीले उनका शरिरका अंग चलाइरहेका छन् । उनीमाथि कोही प्रयोग भइरहेको छ ।
त्यसपछि ति एब्यूजरले उनको ब्यागमा २० हजार पैसा हालिदिए र भने, ‘तिम्रो ब्यागमा २० हजार हालिदिएको छु । घटनाबारे कोहीलाई पनि केही भन्यो भने तिम्रो नाङ्गो फोटो र भिडियो मेरो मोबाइलमा छ, सार्वजनिक गरिदिन्छु, मेरो साथी चर्चित फोटोग्राफर छ ।’
उनी ६/७ वर्षको हुँदा फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । त्यही बेलादेखि उनको सपना थियो– ठूलो भएपछि मोडल हुन्छु, कलाकार हुन्छु । तर, उनको सपना त्यही घटनाले तुहाइदियो ।
‘हामी पीडितलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । उहाँ सम्पर्कमा आएपछि मात्रै अनुसन्धानका अन्य पाटा अघि बढ्छन्,’ एसएसपी केसीले भने ।
Posted in मनोरञ्जन, मुख्य समाचार, समाचार